Esi mgbọrọgwụ gị gam akporo na Framaroot site na ngwaọrụ n'onwe ya Gam akporosis
Etu esi agbanye mgbọrọgwụ gam akporo gị na Framaroot
Ọzọkwa anyị ga-ekele ndị onwe ha mmepe nke Ndị na-emepụta XDA maka ịmepụta ngwa ngwa n'efu ma mee ka ndị ọrụ niile nwere mmasị na ya nwee ya esi gbanye ngwaọrụ gam akporo gị.
Framaroot bụ aha nke ngwa ahụ ma na-aga n'ihu mgbe niile iji tinye ngwaọrụ ọhụrụ kwa ụbọchị. Lee, anyị kọwara ya dị mfe echichi na ojiji.
Ka ịwụnye Framaroot mbụ anyị ga-aga na ntọala ntọala nke ọnụ anyị ma mee ka ikikere iji wụnye ma na-agba ọsọ ngwa amabeghị ụzọ, ozugbo emechara nke a, anyị nwere ike budata ngwa site na otu uzo a, soro ụzọ nbudata ya na onye nyocha faịlụ ọ bụla ma mepụta ya site na ịpị ya.
1 Etu esi gbanye ọnụ anyị na Framaroot
2 Ndepụta ụdị ndị akwadoro na njikwa ha dị iche iche
Etu esi gbanye ọnụ anyị na Framaroot
Ozugbo etinyere ngwa ahụ, anyị ga-pịa ya ma ihuenyo yiri nke a ga-apụta:
Ugbu a, anyị ga-ahọrọ nhọrọ dabara na mkpa anyị kemgbe Framaroot na-ejere Mgbọrọgwụ o unroot anyị gam akporo, na nke a anyị ga-ahọrọ otu n'ime nhọrọ abụọ anyị nwere iji gbanye ọnụ anyị, anyị ga-ahọrọ Superuser o Supersu, na nke a ahọrọwo m Superuser.
Ozugbo emere nke a, anyị ga-ahọrọ n'etiti otu ịkpa ike dị na ndepụta dị n'okpuru, ndepụta a nwere ike ịdị iche dabere na njedebe nke anyị wụnye ngwa ahụ, dịka ọmụmaatụ na m LG L3 E400 ọ na-enye m nhọrọ nke Gandalf:
Ọ bụrụ na anyị enweta ihe karịrị otu iji na ngwa ahụ, anyị ga-achọ ihe nlele anyị dị ka lndepụta dakọtara ọnụ ezitere na nnọkọ ahụ XDA anyị ga-ahọrọkwa nke ziri ezi.
Ọ bụrụ na ọnụ anyị apụtaghị na ndepụta ahụ edepụtara, nke a ekwesịghị ịpụta nke ahụ Framaroot dakọtara na ngwaọrụ anyị, anyị ga-ewepụ obi abụọ naanị site na ịnwale ngwa ahụ na ịhọrọ ịkpa dị otu otu ruo mgbe anyị ga-ahụ nke nwere ike ịrụ ọrụ maka anyị.
Ọ bụrụ na Jiri ya mee ihe ahọpụtara nke ziri ezi, ọ ga-eweghachi ozi dịka nke a:
Ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu, ọ ga-alọghachite ozi dịka nke a:
Na nke a, anyị ga-anwale ihe ndị a ruo mgbe ike gwụrụ.
Imecha Mgbakwunye gam akporo anyị ga-amaliteghachi ọnụ anyị ga-enwerịrị ikikere onye isi.
Ndepụta ụdị ndị akwadoro na njikwa ha dị iche iche
Were dị ka si XDA
Mmekọrịta maka ngwaọrụ Qualcomm (Gandalf jiri naanị):
Asus transformer Kedo akwa Infinity TF700KL
Cloudfone ụtọ 430x
Gigabyte GSmart G1315 kpọdaa
Highscreen ebua / Omega Q / Blast / Ebu / agbam ume
Huawei U8815 / U8816 ọdọk G300 / G301
Huawei U8825D ọdọk G330D
MEDION NDỤ P4013
Micromax A111 Kanvas Doodle
Oppo Chọta 5
Nkọ Aquos Phone SH930W
Na-eche nzaghachi ...
Ndakọrịta maka ngwaọrụ MTK (Boromir na-erigbu naanị):
Alcatel OT 8008D ode-akwukwọ HD
Alcatel OT arụsị 6030X / 6030D / 6030H
Asus Memo Kedo akwa HD 7
Explay ebighebi II
Ofufe IQ440 Energie
Ofufe IQ441 n'enweghị njedebe
Ofufe IQ442 Miracle
Ofufe IQ443 Trend
Ofufe IQ446 Magic
Ofufe IQ450 quattro Horizon 2
Micromax Kanvas HD
Nkọ AQUOS SH837W
ZOPO ZP900 Onye Ndú
Ndakọrịta maka ngwaọrụ Huawei K3V2 (Pippin na-erigbu naanị):
Ndakọrịta maka ngwaọrụ Samsung (Legolas na Aragorn na-erigbu naanị):
Samsung Galaxy Kpọsaanụ S720C
Ndakọrịta maka ngwaọrụ Exynos (Sam, Frodo, Legolas na Aragorn na-erigbu naanị):
AT&T Galaxy Cheta 2 SGH-I317
Highscreen Bọmbụ gbawara agbawa
Akara 9702 (Exynos 4412)
Samsung Galaxy Rịba ama 10.1 GT-N8000, GT-N8010, GT-N8013, GT-N8020
Samsung Galaxy Rịba ama 2 GT-N7100
Samsung Galaxy Rịba ama 2 LTE GT-N7105
Samsung SGH-i997 inye 4G
T-Mobile Galaxy Rịba ama 2 T-889
Verizon Galaxy Rịba ama 2 SCH-I605
iBerry Auxus CoreX2 3G na CoreX4 3G
Ndakọrịta maka ngwaọrụ Omap36XX (Gimli jiri naanị):
Motorola amakwa + (MB525 / MB526)
Icheku ASTEROID Smart
Ozi ndị ọzọ -Ndị ọzọ na ngwa ngwa gam akporo
Budata - Nke kacha ọhụrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Root » Etu esi agbanye mgbọrọgwụ gam akporo gị na Framaroot
Ọ naghị arụ ọrụ na galaxy m n8000, emere m usoro ahụ niile na mgbe ị na-etinye superuser ọ hapụrụ ngwa ahụ
Gbalịa supersu na dị iche iche ịkpa.
Chere m nwere lg l3 e400 na nkea ị na-ekwu na ọ naghị arụ ọrụ. Agbalịrịla m ịgbanye ya ma ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ maka m ejirila m site na mmemme kọmputa na z4 mgbọrọgwụ. ị maara ihe dị irè iji gbanwee ya?
Ekwughị m na nkuzi a anaghị arụ ọrụ, n'ụzọ dị iche, maka usoro LG L ọ zuru oke.
Oscar Zaragoza dijo
N'ime ndepụta ahụ ma ọ bụrụ na nke m pụtara LG l7x p714 mana mgbe m nyere ya ngwa ahụ ọ na-emechi onwe ya na ọ nweghị ihe na-eme anyị.
Zaghachi Oscar Zaragoza
otu ihe ahụ na-eme m n’ụlọ nga
ok, Enwere m LG Optimus L3 ma ọ na-agwa m: ị ga-erigbu ihe na-emezughị 🙁 gbalịa ịmegbu ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị (Njehie # 5) naanị nhọrọ nke na-enye m ohere bụ gandalf.
Edemede a ochie. Ọ dịla anya e mepụtara ihe ndị a. Gharia onye ode akwukwo obere tupu o biputa
Enwere ike ime ya na ngwakọta motorola
Lelee ndepụta nke ọnụ ọnụ dakọtara, ọ bụ ezie na achọtaghị ya, ịnwere ike ịnwale ya n'enweghị nsogbu.
Foto ndị a “dara” ma ọ bụ ndị ahụ “Succes” bụ azụ, azụ?
Daalụ maka ihe ị deturu, a na-emezigharị ya.
onye ode akwukwo dijo
Akwụkwọ galaxy m gt7000 ahapụla m ka m kwụgidere, daalụ nke ukwuu!
Zaghachi onye nlekọta
Ekwentị m bụ Samsung Galaxy S4 Mini nke m ga-eji
Zaghachi Gabriel Montalvan
Enweghị m xploit ọ bụla, ọ na - ekwu ihe gbasara adịghị ike uu
Ọ naghị arụ ọrụ na htc one s
Ekwentị Ekwesịrị ịgbanye ụgwọ zuru oke? Ọ na - eme m na m nyere ya, ọ mechiri emeghị ihe ọ bụla, ọ bụ lg l7 p700, yana jelii agwa 4.1.2
Ọ naghị arụ ọrụ m ka m nweta nke a, Ngwaọrụ gị yiri ka ọ gaghị adaba nrigbu ahụ gụnyere na framaroot, enwere m photon motorola
ọ naghị arụ ọrụ na lg l5 m wee nweta njehie 5
Zaghachi na andrews
Ndewo, ọ ga-amasị m ịgbanye mbadamba ụrọ androd m na ụdị nsụgharị niile nke framaroot enwere m njehie # 7 iche, agbalịrị m z4root na ọ gaghị ekwe m omume ịgbanye, ị nwere ike inyere m aka.
Zaghachi ka berni
Echefuru m na ọ bụ caizher 4Q-R3 Y na gam akporo 4.2.2.
Ndewo m gbalịrị ịtụgharị lg l7dos m nke m jiri nwaa?
Ndewo, m wụnye ya na motorola D3 m, ntinye ahụ, na-enweghị nsogbu, mana mgbe ịmalitegharị ekwentị ahụ agbanyeghị ọzọ, gịnị gaara eme ma ọ bụ gịnị ka m ga-eme iji weghachite ọnụ. Atụrụ m anya na ị zara ma nye m aka, daalụ.
Na Galaxy Note GT-N7000 ọ gbapụla n'ụzọ ziri ezi, iji zere ọdịda nke ịghara ịgbanye ya, ọ ga-adịrị gị mfe ịmara na ebubo ya zuru oke, na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ ya n'oge niile, yana ịmalitegharị emeela. n'ihi na ịgbanye ya ma gbanye ya nwere ike ọ gaghị enye ume ma ọ gaghị amalite. Daalụ maka ngwá ọrụ ahụ.
Ebudatara m ọtụtụ nsụgharị nke Framaroot maka obere S4 na S3 m, mana n'ime ha niile ọ na-egosi m naanị nhọrọ abụọ iji (Aragorn na Gandalf), ọ dịghị onye n'ime ha na-arụ ọrụ (njehie # 5 na njehie # 6)
Framaroot na Samsung S3 9305 rụrụ ọrụ zuru oke. Ezigbo ngwa.
Zaghachi Veronica Lazarsky
Ndewo, kedụ nke i jiri, enweghị m ike iji otu ekwentị
Naanị ya na-enye m nhọrọ nke boromir maka lg5 m anaghị arụ ọrụ, dịka ndepụta ahụ ọ ga-abụ nke gandalf nke na-apụtaghị, echiche ọ bụla?
obi ụtọ dijo
maka m sansung note gt n7000 gini bu ihe ???
Zaghachi ka ị giss
Framaroot, ọtụtụ nsụgharị na-apụta. Agbalịrị m 1.4, 1,6, na nke ikpeazụ na ndepụta 1.9. Na sAMSUNG S6310N, yana LG.L5 na Onweghị onye na-arụ ọrụ.
Agaghị m enweta samsung galaxi yu gt 60 ị nyere m ụfọdụ akwụkwọ ozi uhie
Na-arụ ọrụ nke ọma na mbadamba i10 mbadamba (SuperSu -> Aragorn).
M na-agbalị na ọ na-adịghị pụta na ikpeazụ nhọrọ ọ na-ewe m nke ngwa
Ọ naghị arụ ọrụ na sgs3 9300 m ... ọjọọ
hey na lg 4x otu o si aru oru bu na odighi na ndepụta ndi kwekorita
Emere m ya na Huawei y100 na ọ nweghị ihe na-enye gandalf ma ọ na-enye njehie okpu # 5
Na -ekwu okwu dijo
Ka anyị lee ma anyị ga-achọpụta otu ugboro.
Mr a bụ onye nchịkọta ozi na isiokwu masịrị ya, nke na-apụtaghị na ọ bụ Akwụkwọ Nsọ dị ndụ nke ihe ọ biputere.
Chọọ maka ozi ma mepụta ọkwa na ozi ị hụrụ. - Uzo -.
Ọ na-eme m ọchị onye ọ bụla na-ede ihe nlere anya nke azịza smart ha maka azịza nke, dịka ị pụrụ ịhụ, adịghị abịarute.
Kelee ya maka ịkọ akụrụngwa, ngwa na ihe ndị ọzọ ma site n’ebe ahụ, chọọ ndụ naanị, nke bụ ihe anyị niile na-eme !!!
Ọ bụrụ na ị bịarutere ebe a, ọ bụ n'ihi na ị maara otu esi eji google ... nke ọma, gaa n'ihu na google, na ctr + D maka ihu akwụkwọ a, onye ọ bụla chọrọ ọrụ ebube nye Lourdes, na onye ọ bụla chọrọ ka a taa ihe, kwụọ onye ọrụ aka. .
Are bụ pesaditos, conyo!
A akụkọ na-egosi na.error ma m na-ekwu na ọ bụ njehie 6 #
Ọ BBORBOR THE NGWAỌR OR KA Ọ B TRURN Gbanyụọ ma gbanye ya?
Nsogbu m bụ ihe ndị a ka m gbalịrị ịwụnye sistemụ arụmọrụ na samsun galaxy N7000 note. Ma ekwentị anaghị anabata ịwụnye gịnị ga-abụ nsogbu? Agbalịrị m ịwụnye ya na Odin 3.09 mana ọ naghị anabata Biko Achọrọ m enyemaka
Ugbodua 976 dijo
Zaghachi brea 976
Enwere ike onye kọwaara m ihe kpatara na mgbe m wụnye framaroot ọ na - achụpụ m na mmemme ahụ ??? Ma ọ gaghị ekwe ka m gbanye ya
Zaghachi na pam
Otu ihe a na eme m k pamm enwerem l7 optimus p708 ihe di ka ya
Zaghachi ka enki
McAffee Antivirus na - achọpụta ngwa ngwa Framaroot dịka Trojan dị oke egwu. Wepu ya
OK na M-Joy Elektra (ya na Gandalf). Daalụ nke ukwuu.
Enwere ike iwepụ Framaroot ozugbo gbanyere mkpọrọgwụ ma ọ bụ ka ahapụ ya ka etinye ya na ekwentị?
Ezigbo ... Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka. ? Achọrọ m ịgbanye m 2-anụ ọhịa taabụ 10,1..download faịlụ framaroot 1.9.3.apk ọ arụnyere .. ma mgbe m na-emeghe ya na-agwa m na ọ bụ dakọtara…. Nọrọ na-ege ntị iji zaghachi
Maka Samsung galaxy s3 i9300 m naanị Aragon na-apụta ma ọ naghị arụ ọrụ ma ewegheela m ya
Zaghachi ka dayana
Enwere m Samsung galaxy tab 3 Lite na mgbe m mepere framaroot anaghị m enweta ihe ọ bụla n'okpuru aragon, ma ọ bụ aha ọ bụla, gịnị kpatara? Biko nyere aka
Mgbe ị na wụnye ya, ihe niile na-aga nke ọma mana mgbe m mepere ya, enweghị ụdị nhọrọ 3 mana 1 na ọ naghị arụ ọrụ, ị chere na ọ bụ nhazi ụfọdụ nke ngwaọrụ ọ bụla na-ezighi ezi?
Zaghachi Felipe Cerda
jesica ortega dijo
Ndewo ụbọchị ọma…. Ọfọn, nsogbu na LG L1 m bụ na mgbe ọ malitegharia, naanị otu nhọrọ pụtara na site na ebe ahụ, na vidiyo ndị m hụrụ ka ọ na-egosi na m nwere ike ibudata isiokwu na ọtụtụ ihe n'ihi na enwere ike ịchekwa nke a na SD na nke m anaghi aputa out one not the other ... Biko nyerem aka
Zaghachi jesica ortega
Mgbe m mepere superu Dice. A naghị etinye ọnụọgụ abụọ
Zaghachi ka fedexx
Arụnyere na ịrụ ọrụ nke ọma na Ulefone N9589T na Boromir na-erigbu.
Ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ maka m ọ na - ekwu «ngwaọrụ gị yiri ka ọ gaghị adaba adaba iji ya na-esonye na framaroot» gịnị ka m na-eme ??? D ': Aghọtaghị m ihe ọ bụla
Morningtụtụ ọma ka m nwalere ya na Oukitel U16max m wee gwa m "ngwaọrụ gị yiri ka ọ gaghị adaba adaba iji gụnye ya na framaroot", ọ ga-amasị m ka ị tinye ihe nlereanya m na esploits, ekele n'ọdịnihu.
Zaghachi Victor Manuel
ụtụtụ ọma, regharịa m okooko asteroid ma nọrọ otu ebe, mba reboot kedu ihe m nwere ike ime ..na-ekele
Etu esi wụnye ngwa ndi adighi na ngwa anyi
Nwanne Prọfesọ Layton nọ na android